I ngcono namuhla… kodwa plugin manje wayeka ukuhumusha.
Kanti futhi kanjani URL traslating umsebenzi? njengoba I dont ngibone noma yini ukusebenza kuleso noma.
Le nguqulo URL uthatha izingxenye url ukuthi kukhona lihumushekela abuye etame ukuhumusha kwabo emuva naphambili, nasemuva yilapho ikhasi is wadala, wonke ama-URL kufakwe ukuba ezinguqulweni zabo, futhi emuva, kulapho ucela umsebenzisi a url elinjalo, -plugin utshela wordpress yimuphi page empeleni umsebenzisi ekukhulunywe. udinga ukunika amandla ukwesekwa ngoba kule izilungiselelo.
Ngingajabula ukuhlola ukuthi kungani plugin bayeka ukuhumusha, kodwa ngidinga ezinye URL ukubheka…
Rob Davies uthi
Ukuhumusha of URL sika!!- Engangikufune bezungeza okwesikhathi plugin inguqulo empeleni useable nanamuhla (ngosuku wena uyekele version url translation) I bethola plugin yakho – ngiyabonga okuningi kangaka!
Aye aba look at it futhi usebenza elikhulu – kakhulu kwanoma yini ezikhona.
Izinto I ngempela ngakho kukhona:
– Ukuhumusha url
– ekhasini ukuhlela
– kugcina siko izilungiselelo kwemikhumbi okufanayo
– Ngisho uhumusha Konke kwelinye SEO meta nezincazelo!
Fantastic – Ngiyabonga…..
Thanks for the izincomo… Imibono ukuthuthuka bekungaba ukuthi ubhalise
Siyabonga lunga plugin omkhulu. Namuhla I ngcono lona version ezintsha. It zisebenze njengoba kulindeleke. Kodwa kukhona okunye iphutha ezincane Ngicabanga.
Ulimi lokuzenzakalelayo esetshenziswa kwi website yami uba bahasa Indonesia. Ngemuva ngcono, ukuthi babe English on the Kubekwe phambili ngesikhathi ekule ikhasi yokuphatha hhayi kwashintsha.
Ngiye ngizame ukuba enze isiNgisi iphutha ngolimi lwami ku page yokuphatha futhi usebenza. Bese, shintsha it emuva bahasa Indonesia, kodwa frontpage namanje babonisa English ngokuzenzakalela.
I do hhayi lapho isiphambeko ncamashi. I am namanje umkhondo it ngenkathi ubhala lokhu. Mhlawumbe ukuthi zivela isilondolozi sesiphequluli, kodwa angicabangi kanjalo.
Ngiyabonga usizo kuwe..
Ngibona site lwakho bahasa, Mhlawumbe uke zazisiza limi ukuthola feature okuyinto ithumela nibe ikhasi English, is the url ushintsha kwi lakho ibha ikheli?
Manje ubone ukuthi zayo kungenzeka inkinga yolimi oluzenzakalelayo, sicela zama ukudonsa Basha kuya phezulu, futhi kufanele kushintshe. uma ngeke isebenze, Mina ngizoba nawe ngqo
Okokuqala, Ngifisa ukunibonga usizo lwakho kodwa namhlanje kungcono akukho usizo ukulwa ngoba web yami imiswe ngaphandle kwesaziso. Ucabangani?
Not, Angiqondile kungcono ngenxa plugin yakho, kodwa ngicabanga nje ukuthi kungani admin server aphethe imisiwe akhawunti yami ngenkathi I am elungisa website yami ngoba ngiyazi zikhona ezinye izinkathazo, futhi ngaphandle kwesaziso too. Akukona ukujabulisa, akunjalo?
Siyabonga lunga impendulo fast. Kuyinto manje bahasa uma ngi shintsha yokuzenzakalelayo lulwimi lwesiNgisi. Uma I setha yokuzenzakalelayo lulwimi bahasa, ukuthi ukubonisa English njengoba iphutha.
Umsebenzi ezesabekayo ekuhumusheni izikhala URLs, ukuthi”s Ukugunda kakhulu futhi kuzosiza kakhulu nge SEO. Kodwa kuthiwani amakhasi? I athole iphutha Ikhasi 'awutholakalanga’ lapho mina chofoza link page esiye lihunyushwe, post URL kukhona amahle afana ngasho, bayatholakala ngaphandle amaphutha. Kungani lokhu okwenzeka?
Nezinye into One, lapho ngithola i-'Ikhasi awutholakalanga’ Iphutha, ikhasi uphindela emuva ngokuzenzakalelayo English Translation. Lokhu kuzokwenza canula izivakashi eziphathelene reselect ngolimi lwabo baphinde, a fix bekungaba omkhulu. Thanks
Ngakho akukho zwi leli phutha ke?
June 14, 2010 at 11:13 at the
Sasicabanga fixed it on 0.5.4 (lokhu kwenzeka emakhasini ukuthi kwadingeka isibonelo hi (for Hindi) in url thier, futhi safike lihunyushwe) uma sisaqhubeka kwenzeka, nje impendulo nge url ngathi ukuhlola.
sorry for kungenjalo siphendula maduzane, kanye godspeed
Ukuhlwaya Iphutha: Iphutha miyalelo, $ ezingalindelekile bagcina /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php on line 2131
im obuyekeziwe plugin entsha, futhi nge patch omusha kodwa lelo base yabonakala. ungitshele kanjani ukuzixazulula.
June 6, 2010 at 2:04 at the
Kungani ziphume endaweni oda in the admin the amawijethi? Futhi kungani ami hhayi original wokuhumusha in the version entsha ukushintsha?
Ngazama the 0.3.4 zothando futhi basebenza kahle khona amawijethi kule admin kodwa angikwazi behumusha laphaya too.
Ngithemba for the version elilandelayo kakade iphutha uthola ngokukhululekile ke ngubani.
Noma kunjalo kahle kakhulu isesekeli little!
It, ukuthi ake konke sisebenze Kumele ukusebenzisa 0.5.2 okufushane ohlangothini, kodwa iphutha amawijethi ukubhala kuso njengoba isithombe sikhombisa it.
I abaqondi imibuzo yakho yokuqala emibili, ngakho sicela ubengawubeka kubo
Ngiphinde musa uthole iphutha okubonayo, Akubukeki ukuba ibe ikhodi yami, nakuba kungaba, Le away hamba lapho transposh ikhubazekile?
IsiZulu sami siwukuthi kancane abampofu I cela lokhu wena Ngiyaxolisa.
Uma lo transposh icishiwe ke kahle konke imisebenzi.
Umbuzo wami wokuqala uwukuthi: Kungani umsebenzi amawijethi kule surface yokuphatha uma le transposh kunikwe amandla?
Eyesibili sami siwukuthi: Kungani Angikwazi ukuhumusha ku sha version entsha at 0.5.3 uma i sebenzisa edit translation?
Kumelwe asebenzise 0.5.2 okufushane becouse i angaba ukuhumusha nalokhu.
Kodwa ingabe aphume oda Kodwa nokho kimi vumela iphutha labahumushi kolimi owaziyo it nokho lokho akukhona workin.
Ingabe lesi phutha zenzeka nami kuphela?
Ngithemba ngiyitholile right manje
1. Asizange amandla phezu ukusebenzisana yokuphatha, ngoba kuyoba umsebenzi kakhulu inzuzo kancane khulu, Sikhetha imali isikhathi kwamanye, (okuyinto sethemba) kukhona izici ezibaluleke kakhulu
2. Cha, thina ukuqagela a bug yazithandela ngo laphaya, 0.5.4 kumane out – sicela lizame
Ngizamile 0.5.4 zothando kodwa ngeshwa lutho iye yashintsha.
Ngazama the 0.5.4 Izinguqulo kodwa ngeshwa lutho washintsha.
June 7, 2010 at 7:35 at the
ngiyabonga lunga plugin enkulu futhi esidabukisayo for English wami omubi.
Nginenkinga nge transposh: lapho ngafaka post, engenzi ukuhumusha izilimi.
June 7, 2010 at 7:48 at the
Ngiyabona ukuthi indawo yakho ukusebenza, uchofoze izinguquko amafulegi kuya izilimi ezahlukene, futhi aqedele ukuhunyushwa,
Kumele athile ngokuqondile mayelana nalokho ayisebenzi
June 7, 2010 at 8:04 at the
ofer siyabonga impendulo …
Lapho ngicela umyalo “Ukuhumusha Konke” Angikwazi ayiqede.
June 7, 2010 at 8:09 at the
Lo myalo uyephuza, ukuze ugweme ukudala izimoto kakhulu amaseva Google. Ungase nawo ivinjwe, zama bayisebenzisa ovela ip ehlukene, noma bamane balinde.
June 7, 2010 at 8:27 at the
Ngazama wengeze elinye ukuxhumana ayisebenzi:
I vumela umyalo “Ukuhumusha Konke” ubusuku bonke is hhayi kuqeda.
Kubonakala ukuthi ipulaki-in amabhulokhi.
Ngaphambi ipulaki-in kwaba okuningi ngokushesha.
June 7, 2010 at 9:17 at the
Again, lokhu kuhlobana misebenzi, I asikisela wena zama kwi kusuka kwikhompyutha / isiphequluli ezahlukene. I ukuhumusha yonke elinda 5 imizuzwana emkhatsini ukuhumusha inkulumo ethi ngalinye, uma ufuna ukuba iye ngokushesha, ungahlela ikhodi
Uma ukholelwa indawo kancane, lokhu cishe uyobe kuyiqiniso, kodwa ukufaka Apc kuyasiza kakhulu
June 7, 2010 at 9:54 at the
Ofer Siyabonga ngosizo …
June 7, 2010 at 10:04 at the
I umkhawuleziso for PHP Its, kanye transposh kwenza ukusetshenziswa kwaso ukuze ugweme ukufinyelela semininingwane
Ngiyabonga usizo lwakho.
I ayaqhubeka unezinkinga transposh.
Akakwazi wenze wokuhumusha.
Kuphi I amaphutha?
Thanks for the usizo.
noma lokhu kuhlobana:
June 9, 2010 at 8:33 at the
Ngisho nanamuhla kuba into efanayo:
I Wanezela iposi elisha ukuze iphaneli WP yokuphatha 2.9.2
Kuchofoziwe “Update” ukugcina lo iposi, Nokho, le nguqulo okuyingxenye, le izinkomba ebhokisini Transposh isemanzini futhi Ungawuhlehlisi.
Ngesikhathi ngenza hlola ngasohlangothini yomsebenzisi inguqulo, lombhalo elihunyushwa, kodwa uhlala ngolimi zalo zokuqala.
Engiye ihlolwe nomunye isiphequluli, kodwa siziphathe ngendlela efanayo.
Siyabonga futhi ngosizo.
Manje yonke imisebenzi ….
Siyabonga futhi ngosizo eliyigugu.
June 14, 2010 at 7:17 at the
Sorry, kodwa enginakho inkinga aphinde uvimbele.
The izinkomba in “ibhokisi Transposh” isemanzini futhi Ungawuhlehlisi.
I uchofoze inkinobho “ukuhumusha Konke” futhi uyakwazi ukwenza inguqulo (asetshenziswa ubusuku).
Ngaphambi “ukuhumusha sonke” imisho elihunyushwe zaba 197624, emva 207311.
Manje yena ayisekho olimini izilimi umsebenzi omusha kanti ikhiyiwe.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe othile bug kancane.
Manje ngithemba ukumbona zisebenze njengoba ngaphambi ….
June 14, 2010 at 11:11 at the
Usuke ukuhumusha okuningi zezingcezwana, kungenzeka injini Google ubona lokhu ngendlela engafanele. I ibonisa ukuzama kusuka kwikhompyutha / ip ezahlukene. Kungenzeka futhi ukwenza inqubo ngokushesha ngokuhlela ikhodi yomthombo.
Rob Daves uthi
June 14, 2010 at 10:14 at the
Nje ambalwa imibuzo / amaphutha kunokwenzeka:
– ngezinye izikhathi url asisho ukuhumusha kahle, Ingabe ikhona indlela ukushintsha lokhu njengoba le permalinks sithatha umbhalo untranslated (eyodwa noma evamile kuphela 2 amagama-URL)? Kube nje look futhi ngicabanga inkinga wukuthi Title is hhayi kokuba lihunyushwe ngokufanele (njengoba yilokhu permalinks ziya ngiphakamisa) Ingabe ikhona indlela ukuhlola kuqala isihloko njengoba ekushintsheni permalinks emva Ukuthumela is a ubuhlungu. Ngezinye izikhathi lokho kuyobe ahumushe catagory.
– Ingabe likhona noma kunjalo ukuchibiyela ikhodi yomthombo Ikhasi (isib incazelo meta)
– noma amakhasi ngamanye egcinwe endaweni ethile kwi ifolda server ukuze kuchitshiyelwe laphaya?
June 14, 2010 at 11:09 at the
I ngezinye izikhathi kuba lapho url awuzange okwamanje lihunyushwe, uma wena inikwe amandla ukuhumusha on ngeposi kumele kwenzeke esikhundleni ngokushesha, the ukuhumusha yonke imisebenzi ibuye, Nokho ngeshwa kukhona namanje kungekho indlela yokulungisa lesi translation. Kuyoba kwezinye esizayo 😉
a kwalokho nice ingase ibe ukudala 301 Ukusabela lapho url awukona ncamashi esinembile, Kodwa lokhu kungaba patch olukhohlisayo futhi asikho isiqiniseko sokuthi sifuna ukugxila energy yethu laphaya.
Incazelo meta nalo kokuba lihunyushwe, njengoba okuhle njengoba lo kungakusiza plugin for manje. Umqondo wukuthi in inguqulo esizayo ozayo sizobe adale interface ukuze ubonise konke izingcezwana ekhona ekhasini, kuhlanganisiwe metas.
Ayikho amakhasi egcinwe kwi iseva ye ukuhlela, kodwa ungakwazi njalo ukubuyekeza etafuleni ukuhumusha ngqo, nakuba mina ngeke batusa lokhu.
June 14, 2010 at 11:34 at the
Siyabonga izimpendulo zakho. Kungenzeka yini iqiniso lokuthi. HTML ekugcineni kwakungase kubangele izwi odlule hhayi ukuba ahumushe? Kanti futhi emva elihunyushwe le permalinks engashintshi (ngemva kokusebenzisa njengesibonelo% post% ) Uma ngibeka emuva ekubhaleni futhi reposted uyosho msebenzi?
Kanti futhi lo iwijethi for transposh – kungenzeka yini ukuba ube njengesiqondiso unhlokweni phezulu njalonjalo everypage the amafulegi ukuvela njengendlela unhlokweni encane egijima phesheya kwekhasi for navigation lula?
Uma amakhasi abazona amakhasi do izinjini babone lokho elondolozwe ku etafuleni translation and ufunde la njengoba amakhasi?
June 14, 2010 at 11:44 at the
Imibuzo eminingi, nazi izimpendulo:
1. yebo, the. html cishe nqamula
2. ashintsha ngokushesha nje inguqulo ikhona ngabo, nje reposting ngokuvamile okuhle ngokwanele, kodwa ukuhumusha sonke cishe kungcono empeleni
3. I cabangela kungenzeka, ungase kufanele tweak ikhodi kancane
4. Amakhasi yokuhumusha bangabantu amakhasi ziyafana amakhasi akho wordpress kuyizinto amakhasi, ngakho eliyikhasi abakhase phezu lezo amakhasi mhlawumbe page kubo njengoba ikhasi ngokuvamile kube paged
June 29, 2010 at 8:56 at the
Siyabonga izimpendulo zakho. Just kwenziwe amanye eminye eliphakeme futhi kuba khona abaningana 404 amaphutha yiziphi Ungathi:
(URL) /ingxenye / option,com_frontpage / Itemid,1/long,it /
Engiye wanezela lesi akukho 404 amaphutha plugin futhi ngethemba lokhu imisebenzi.
I am godu ukuthola abaningana okuphindiwe izincazelo Meta and isihloko tags – obukhona kunjalo nxazonke lokhu?
June 29, 2010 at 9:35 at the
Inkinga meta asesetshenzwa on, liphinde Ufika lihunyushwe uma kuhambisana inkulumo ekhona ekhasini, inguqulo esizayo enizohlasela lokhu kangcono.
Angazi uthole 404 amaphutha, lezo akufanele kwenzeke, kodwa uma ufuna ukubona ngempela ngidinga ukubona url ukuthi kubangela anjalo links ezimbi
June 29, 2010 at 11:00 at the
The plugin Ukuqondisa kabusha wenza kusiza njengoba 404 sika konke kabusha ikhasi set. Bheka http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
njengoba isibonelo ikhasi owadalwa futhi manje kabusha.
Kepha meta I sebenzisa kuqala 160 amazwi kulesi sikhundla the ngcaphuno – I am besebenzisa sonke kwelinye seo okuyilapho inkinga ingase ibe. Ngezinye izikhathi uhumusha ezinye lokhu kodwa kuvamise akuwona wonke yayo.
Bheka phambili update… ngiyabona futhi.
Hi Ngiyayithanda plugin yakho, kodwa mina unenkinga nge page elilodwa: it elihunyushwe market womlimi nalesi ‘ asayine on the url, ngakho ngicabanga ukuthi uzigcina ukuthi isebenze kwesokudla…
Ungabona isiphambeko ngokuchofoza ifulege USA (ekhoneni eliphezulu kwesokudla) ngaleli kuhlobana:
Noma yimiphi imibono Ngingabenza silungise indlela lokhu? Mhlawumbe ethinta into on the isilondolozi database noma transposh?
Ngakho uma umuntu eza yonkana inkinga yami, kufanele uyenze eposini test ngamazwi athi ngaphakathi ikhophi, selikhona elihunyushwe bese ulungisa ukuhunyushwa ukuthatha khefana kuyo, ukuthi kuyoba ulungise URL ku elihunyushwe post yasekuqaleni. Akukona abaphelele Nokho ngoba ibinzana kuyoba okungalungile (kokusuka Abalimi Market esikhundleni Market Farmer sika) kodwa sisenkingeni esheshayo.
Ngiyabonga kakhulu umqondo Ofer.